Ampidino WhatsApp Messenger ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (140.00 MB)
Ampidino WhatsApp Messenger,
WhatsApp dia fampiharana fandefasan-kafatra maimaimpoana mora apetraka izay azonao ampiasaina aminny finday sy aminny Windows PC - solosaina (toy ny tranokala na tranokala) Azonao atao ny misintona sy mampiasa WhatsApp aminny telefaoninao na mampiasa azy io ho toy ny rindranasa aminny birao Windows PC na solosainao Mac. Ny rindranasa WhatsApp desktop dia miasa miaraka aminny rindranasa WhatsApp napetraka aminny telefaoninao. Raha atao teny hafa, rehefa tonga ny hafatra WhatsApp aminny findainao / iPhone Android dia azonao atao ny mijery sy mamaly azy aminny solosanao. Na dia tsy mandroso loatra aza ny fampiharana WhatsApp Web dia manatanteraka ny asany fototra izy io. Ny WhatsApp for Windows dia mihatsara miaraka aminireo fiasa vaovao ampiana isanandro.
WhatsApp PC, izay mifanena aminay ho toy ny kinova desktop anny fampiharana fandefasan-kafatra malaza WhatsApp Messenger, manome antsika ny fotoana hampiasa WhatsApp aminny solosainantsika.
Miaraka aminilay rindranasa, izay atolotra maimaim-poana, afaka manaraka ny hafatray rehetra eo aminny birao sy mandefa rakitra, sary ary horonan-tsary aminireo namantsika izahay. Ny kinova Desktop anny WhatsApp Messenger, izay ahafahantsika mampiasa mora foana ny ankamaroanny endri-javatra aminny kinova finday, aminny birao dia tena ilaina tokoa.
Hafatra - Hafatra mora sy azo antoka: Hafatra ho anny mpianakavy sy ny namana maimaim-poana. WhatsApp dia mampiasa ny fifandraisana Internet aminny findainao handefasana hafatra, ka tsy mila mandoa SMS ianao.
Chat aminny vondrona - Vondrona tianao hampitaina: Mifanakaloza hevitra aminireo vondrona manan-danja aminao, toy ny fianakavianao sy ny namanao. Aminny resadresaka ataonny tarika dia azonao atao ny mizara hafatra, sary ary horonan-tsary miaraka aminny olona 256 indray mandeha. Azonao atao ny manome anarana ny vondrona misy anao, mampangina azy na mametraka fampandrenesana mifanaraka aminny safidinao.
WhatsApp aminny Internet sy Desktop - Mifampiresaha foana: Miaraka aminny WhatsApp aminny tranonkala sy ny birao, azonao atao ny mampifanaraka tsara ny chat anao aminny solosainao. Aminizay dia mora kokoa aminao ny manohy ny resaka avy aminny fitaovana tianao. Sintomy ny rindranasa birao WhatsApp na mandehana any aminny WhatsApp Web.
WhatsApp Voice & Video Call - Miteny malalaka: Aminny antso an-tariby, afaka miresaka maimaimpoana aminny fianakaviana sy ny namana ianao, na dia any an-tany hafa aza izy ireo. Rehefa tsy ampy ny feo na ny soratra dia manana fotoana hiresahana mifanatrika aminny antso an-tsary maimaimpoana koa ianao. Ny fiantsoana feo sy horonan-tsary WhatsApp dia mampiasa ny fifandraisana Internet aminny findainao.
Encryption end-to-end - azo antoka foana: ny fanatsarana ny end-to-end dia nihatsara tao aminny WhatsApp farany. Ny hafatrao sy ny antso ataonao dia voaaro aminny énkripsi end-to-end. Ianao sy ny olona ifandraisanao irery no afaka mamaky na mihaino azy ireo, ary tsy misy olona eo anelanelany (na ny WhatsApp aza) afaka mamaky na mihaino azy ireo.
Sary sy horonan-tsary - Mizarà Hevitra Misongadina: Afaka mandefa sary sy horonan-tsary avy hatrany aminny alàlanny WhatsApp ianao. Azonao atao koa ny mizara fotoana iray manan-danja azonao taminny fakantsary natsangana. Tsy maninona ny hafainganam-pandehanny fifandraisanao; Haingana ny fandefasana sary sy horonan-tsary aminny WhatsApp.
Hafatra am-peo - Teneno ny sainao: azonao atao ny manoratra hafatra am-peo iray hiarahabana fohy na milaza zavatra lava aminny paompy iray monja.
Antontan-taratasy - Mora mora ny mizara antontan-taratasy: Mandefasa PDF, antontan-taratasy, takelaka, sary mihetsika, sns, tsy misy manahirana ny mailaka sy ny fizarana rakitra. Afaka mandefa antontan-taratasy hatraminny 100 MB ianao.
Ka ahoana ny fampidinana ny WhatsApp Desktop? Ahoana ny fampiasana WhatsApp aminny solosaina? Azonao atao ny mampiasa WhatsApp avy aminny biraonao solosaina nefa tsy mila mpitety. Raha misintona ny rindranasa WhatsApp Desktop, ny sisa ataonao dia; Fipihana ny bokotra WhatsApp Download etsy ambony. (Mihazakazaka aminny Windows 8.1 na vao haingana izy ity ary raha mampiasa rafitra miasa Windows 32 bit ianao dia tsy maintsy misintona avy aminny rohy faharoa.) Ny fametrahana ny rindranasa Whatsapp Desktop dia tsotra toy ny fampidinana azy. Rehefa vita ny fisintomana dia sokafy ny rakitra .exe ary araho ny torolàlana hamita ny fametrahana.
Afaka mampiasa WhatsApp aminny solosainao aminny fomba roa samy hafa ianao: WhatsApp Web sy WhatsApp Desktop. WhatsApp Web no fampiharana miorina aminny browser anny WhatsApp. WhatsApp Desktop dia rindrambaiko azonao apetraka aminny solo-sainanao. Ny app Desktop sy ny WhatsApp Web dia fanitarana miorina aminny kaonty WhatsApp aminny findainao. Ireo hafatra alefanao sy azonao dia ampifanarahana aminny telefaona sy solo-sainao. Azonao atao ny mahita ny hafatrao aminny fitaovana roa.
Haben'ny rakitra: 140.00 MB